क्वारेन्टाईनबाटै २२ वर्षिया महिला परपुरुषसँग भागिन् ! हिंडेर आउँदा बाटाेमै परेको थियो लभ(भिडियो सहित) « Bagmati Online
क्वारेन्टाईनबाटै २२ वर्षिया महिला परपुरुषसँग भागिन् ! हिंडेर आउँदा बाटाेमै परेको थियो लभ(भिडियो सहित)
काठमाडौं । लामो समय देखिको लकडाउनका कारण विश्वभरमा मात्र होइन नेपालमा पनि रोचक खबर बाहिर आउन थालेका छन् । वारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिकामा एक २२ वर्षीया महिला क्वारेन्टाइनवाट भागेर एक पुरुषसंग विवाह गरेर गएकी छन् । उनको नाम गंगा गुरुङ भएको बताइएको छ । कोरोनाको जोखिम रहेर क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्थामा भागेका कारण उनलाई प्रहरीले केही घण्टा नबित्दै पक्राउ गरेको छ । उनले आफ्नो वैवाहिक जिवन रमाइलोसंग विताउन नपाउँदै प्रहरीको फन्दामा परेकी छन् । उनी १८ गते काठमाडौवाट हिडेर वारा पुगेकी थिइन् । पैदल हिडेर उनी ३ दिन हिडेर वारा पुगेको हो । उनीसंगै रहेकी दिदीले यो कुरा खुलाएकी छन् । काठमाडौंवाट पैदल हिडेर पुगेका कारण उनीहरुलाई ज्वरो आएको थियो, खुट्टा पनि सुन्नीएको थियो त्यसैले उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
क्वारेन्टाइनमा दिदी बहिनीलाई संगै राखिएको थियो । बहिनीको घर चितवन भएपनि लकडाउनका कारण खान बस्न अप्ठेरो होला भनेर आफुले बहिनीलाई आफ्नै घरमा ल्याएको भएपनि क्वारेन्टाइनमा बस्न परेको उनले बताइन् । आफुसंगै आएको बहिनी आफुलाई क्वारेन्टाइनमा छोडेर अर्कै केटासंग भागेपछि दिदी निकै चि’न्तित भएकी छन् । एउटा घरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका दिदी बहिनी मध्य बहिनी भागेपछि अहिले दिदीमात्र छन् । क्वारेन्टाइनमा एउटै कोठामा बसेको भएपनि उनीहरुको बेड अलग थियो ।
क्वारेन्टाइनमा हुँदा बहिनी फोनमा कुरा गरिरहन्थिन् तर दिदीले वास्ता गरिनन् । उनको वहिनी पनि विवाहित भएको र आफ्ना श्रीमानसंग भने केही समय यता राम्रो स’म्बन्ध नभएको दिदीले बताएकी छन् । बहिनीको २ बच्चा पनि छन् । जेठो सन्तान ६ वर्षको रहेको दिदीले बताइन् । बहिनी जो संग भागिन् त्यो पुरुष पनि एउटै गाउँको भएकाले काठमाडौंवाट पनि संगै गएका थिए । काठमाडौंमा भेटिएपछि हामी एउटै गाउँमा जाने मान्छे संगै जाउँ भनेपछि संगै गएको बताइन् । बहिनी त्यसरी हिडेपछि २ छोराछोरीलाई बहिनीको पहिलाको श्रीमानको परिवारले नै लिएर गएको बताइन् ।